Nylon yarn mugadziri | Salud Yarn
Imba > Yarn Zvigadzirwa > Nylon dty
Nylon ndiyo yekutanga Synthetic fiber kuoneka munyika, uye nylon ishoko rePolyamide fiber.
Iko kubuda kweNylon kwakapa tarisiro nyowani kune zvinyorwa. Yayo Synthesis yakakura breakthrough mune synthetic fiber indasitiri uye yakakosha kwazvo chiitiko muPolymer Chemistry.
Polyamide, anowanzozivikanwa seNylon, kana pa kwenguva pfupi, ndiyo nguva yerudzi rwekudzokorora mapoka mapoka Pakati pavo, Aliphatic Pa ane marudzi mazhinji, akakura uye anoshanda akashanda, uye zita rayo rinotemwa neiyo nhamba yekaroni yeiyo menomer.
Nylon dty Zvivakwa:
Chimiro chikuru cheNylon chakakura simba uye zvakanaka kupfeka kurwisa.
Iko kukanganisa kweNYLON kwakafanana nePolyester, nehurombo hygroscopicpicity uye kubvumirana. Munzvimbo yakaoma, nylon inotsanangurwa nemagetsi emagetsi, uye zvipfupi fiber machirawo anowedzerawo kuyerera uye piritsi. Nylon'Kupisa uye kupokana kwechiedza hakuna kunaka, saka iyo tembiricha yekuisa inofanirwa kudzorwa pazasi 140 ° C. Mukuwedzera, nylon ine simba rekuchengetwa, uye zvipfeko zvakagadzirwa hazvina kuomarara sePolyester uye zvakaremara nyore nyore. Asi inogona kusungirirwa kumuviri uye chinhu chakanaka chekugadzira mahembe akasiyana siyana emuviri.
Iyo mucheka wakagadzirwa naNylon FDY inonzwa kutsvedza uye yakapfava, uye inowanzoshandiswa kurongedza silika machira. Iyo ine huwandu hwakawanda hwekushandisa muzvipfeko uye zvekumba.
Nylon filing yarn yakapindwa yakarongedzwa 40-70d
Salud yarn best nylon filing yarn yakapindirwa yakarongedzwa yakaderedzwa 40-70D mutengesi, yakasimba r& D timu, isu tine seti yakazara yemachinda ekutarisa ezvigadzirwa zvichangogadzirwa.
Nylon filing yarn dty (raw chena) 10-36d
Salud yarn best nylon filing yarn Dty (raw chena) 10-36d mutengesi, akasimba r& D timu, isu tine seti yakazara yemachinda ekutarisa ezvigadzirwa zvichangogadzirwa.
Nylon filing yarn dty (raw chena) 40-70d
Salud yarn best nylon filingy yarn dty (raw chena) 40-70D mutengesi, yakasimba r& D timu, isu tine seti yakazara yemachinda ekutarisa ezvigadzirwa zvichangogadzirwa.
Nylon filing yarn dty (raw chena) 70-300d
Salud yarn best mhando nylon filingy yarn dty (raw chena) 70-300d fekitori, yakasimba kugona kusangana nevatengi kudiwa
Nylon dty yakakwira tenacity yakamanikidzwa 10-36D
Salud yarn yakanakisa nylon dty yakakwira tenceed yakamanikidzwa
Nylon dty yakakwira tenacity yakamanikidzwa 40-70d
Salud yarn Best Nylon Dty High Tacity Tacity yakamanikidzwa 40-70D Supporter, yakasimba kugona kusangana nevatengi kudiwa kwevatengi
Nylon dty yakakwira tenacity yakamanikidzwa 70-300d
Salud yarn yakanyanya kunaka nylon Dty yakakwira tenceed yakamanikidzwa 70-300d supporter, mamiriro ekutengesa ekutengesa. Tinogona kuenderana nematambudziko akasiyana siyana mukutengeserana kwenyika dzese.
Nylon dty yakakwira tete yakafa 10-36d
Salud yarn akanakisa nylon dty yakakwira tete yakafa
Nylon dty yakakwira tete yakafa 40-70D
Salud yarn akanakisa nylon Dty High Tanacity akafa
Nylon dty yakakwira tete yakafa 70-300d
Salud yarn akanakisa nylon Dty High Tacity akafa 70-300d Supporter, isu takasvitsa maAgent Officile Model, tigamuchire zvese zviso vatengi kuhwina-kuhwina kuhwina-kuhwina.